WARBIXIN+XOG: Faahfaahin ku saabsan Duqeyn diyaaradeed oo lagu burburiyey 3 Saldhig Shabaab, laguna dilay Hogaamiyayaal.
MUQDISHO(P-TIMES) – Faahfaahin koban ayaa kasoo baxaysa weeraro duqeyn diyaaradeed ah oo lagu qaaday Kooxda Al- Shabaab tan iyo shalay, kuwaas oo ka dhacay gobalada Baay, Bakool & Jubooyinka, waxaana macluumaadka la helayo ay yihiin kuwa kooban oo ku wajahan arrimahan.
Habeenimadii Isniintii ayaa weerar diyaaradeed lagu qaaday deegaanka Jamaame oo ay xiligaas kusugnaayeen saraakiisha xagga sirdoonka, tababarada iyo howlgalada u qaabilsan Al- Shabaab, waxaana la maqlayay dhawaaqa jug culus oo lagu dhuftay meel tababar lagu sooxirayay.
Saraakiisha oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa tilmaamay in duqeynta koowaad lala beegsaday munaasabad ay Al-Shabaab tababar ugu soo xireysay dagaalameyaal cusub.
Xubnahaasi oo tiradooda aanan la cayimin ayaa waxaa la sheegay in loo qoray guutada xoogaag gacansaarka la leh Al-Qaacida u qaabilsanaa wadanka Kenya ee loo yaqaano Jaysh Ayman.
Warbixinta ayaa intaasi ku dareysa in weerarka labaad ee dhanka cirka lala beegsaday Hogaamiye kuxigeenka Al Shabaab Cabdiraxmaan Maxamed Warsame oo loo yaqaano Mahad Karataay, waxaana wali ka soo baxaya warar is khilaafsan
Illaa iyo haatan lama ogga khasaaraha dhabta ah ee howlgaladaasi kasoo gaarey Al-Shabaab, wallow la tibaaxayo in ay jirto “dhimasho badan”.
Jubadda Hoose oo hoostaga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa wuxuu kamid yahay degaanada ay ku xoogan tahay kooxdaasi, isla markaana ay ku tababarto xubnaha ka barbar-dagaalama.
Duqeyntan ayaa kusoo beegmeysaa iyadda oo Jimcadii ay kulan ku yeesheen tuulada Buula Fulay ee gobolka Bay hogaamiyeyaasha Al-Shabaab, iyaga oo ka wada arrin-saday qodobo dhowr ah.
Xogo la helay ayaa tilmaamay in kulankooda uu daarnaa isbedel ay ku sameeyaan degaanada ay maamulan iyo waliba xeelad cusub oo ay qorsheynayaa in ay kusoo kordhiyaan howlgalada ay fulinayaan.
Mareykanka iyo Kenya ayaa inta badan duqeymo ka fuliya degaanada Jubooyinka, inkasta oo howlgalada culus aalaaba looga bartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Washington.